Ao Am-po ve ny Fanjakan’Andriamanitra? | Izay Lazain’ny Baiboly
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bichlamar Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Ao am-po ve ny Fanjakan’Andriamanitra?
“Tsy lavitra ny fanjakan’Andriamanitra ianao.” —Marka 12:34.
Misy fivavahana iray mitonona ho Kristianina milaza fa ny Fanjakan’Andriamanitra dia ‘ny fitondran’Andriamanitra ao am-pon’ny olona sy eo amin’ny fiainany.’ Maro ny olona mino an’izany.
Tena fitondram-panjakana ny Fanjakan’Andriamanitra fa tsy teny an’ohatra fotsiny mba hilazana hoe manaiky an’Andriamanitra ao am-pony ny olona iray. Hitondra ny tany manontolo io Fanjakana io.—Salamo 72:8; Daniela 7:14.
Ahoana àry ilay tenin’i Jesosy hoe “ny fanjakan’Andriamanitra dia ao anatinareo”? (Izahay no manao sora-mandry; Lioka 17:21, Fandikan-teny Protestanta) Tsy te hilaza akory i Jesosy hoe tao am-pon’ireo nihaino azy ilay Fanjakana, satria ny Fariseo no niresahany. Tsy hiditra ao amin’ilay Fanjakana mantsy izy ireo, hoy i Jesosy, satria nihatsaravelatsihy ka tsy neken’Andriamanitra ny fivavahany. (Matio 23:13) Afaka nilaza anefa i Jesosy fa ‘tao anatin’izy ireo’ ilay Fanjakana, na ‘teo afovoan’izy ireo’, araka ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao. Izy mantsy no ho Mpanjakan’ilay Fanjakana, ary teo anatrehan’izy ireo izy tamin’io.—Lioka 17:21.
“Ho tonga anie ny fanjakanao! Hatao etỳ an-tany anie ny sitraponao, tahaka ny any an-danitra!” —Matio 6:10.
Fitondram-panjakana tena misy io Fanjakana io. Andriamanitra no nanorina azy ary i Jesosy Kristy no Mpanjakany. (Matio 28:18; 1 Timoty 6:14, 15) Hanao ny sitrapon’Andriamanitra any an-danitra sy etỳ an-tany izy io. (Matio 6:10) Io àry no ampiasain’Andriamanitra hamahana ny olana mahazo ny olombelona. Hahavita zavatra mbola tsy vitan’ny fitondran’olombelona mihitsy io Fanjakana io.
Hiadana sy hilamin-tsaina ao amin’ny paradisa eto an-tany ny olombelona sady hanana ny ampy, rehefa hitondra ny Fanjakan’Andriamanitra. (Salamo 46:9; Isaia 35:1; Mika 4:4) Tsy hisy harary na ho faty intsony, ary hofoanana ny aretina. (Isaia 33:24; Apokalypsy 21:4) Na ny antitra aza hihatanora. Hoy ny Baiboly: “Aoka ny nofony ho tsara noho ny an’ny tanora, ary aoka hiverina aminy indray ny heriny tamin’ny fahatanorany.”—Joba 33:25.
Ho lasa vahoakan’ny Fanjakan’Andriamanitra ianao raha manao izay takin’Andriamanitra aminao, na inona na inona firazananao na fiavianao. Hoy ny Baiboly: “Tsy mizaha tavan’olona Andriamanitra, fa amin’ny firenena rehetra, izay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahany.”—Asan’ny Apostoly 10:34, 35.
Ny olombelona ve no hanorina ny Fanjakan’Andriamanitra?
“Hanorina fanjakana tsy ho rava mandrakizay ilay Andriamanitry ny lanitra.” —Daniela 2:44.
Misy mino hoe hahavita hanorina ny Fanjakan’Andriamanitra etỳ an-tany ny olombelona, rehefa mahataona ny hafa hanaraka ny finoany na mahavita mampihavana sy mampiray saina ny olona eran-tany.
Andriamanitra fa tsy olona no hanorina an’ilay Fanjakana. (Daniela 2:44) Hoy izy rehefa nanangana an’io Fanjakana io: “Izaho efa nametraka ny mpanjakako.” (Salamo 2:6) Tsy olombelona no hanorina ny Fanjakan’Andriamanitra. Tsy hahasakana ny fiasan’izy io koa izy ireo, satria avy any an-danitra izy io no hitondra ny tany.—Matio 4:17.
NAHOANA NO ILAINA FANTARINA IZANY?
Ara-dalàna raha irintsika hihavana sy hiray saina ny olombelona, indray andro any. Mety ho efa niezaka mihitsy aza ianao mba hisian’izany, nefa diso fanantenana satria tsy tratra ilay tanjona. Hiezaka ho lasa olom-pehezin’ilay Fanjakana kosa ianao rehefa fantatrao fa Andriamanitra no mitondra an’io Fanjakana io. Tsy ho very maina izany ezaka ataonao izany.
Ny Fanjakan’Andriamanitra no tena noresahin’i Jesosy nandritra ny fanompoany. Efa hatry ny ela koa ny mpanara-dia azy no nivavaka mba ho tonga io Fanjakana io.
Hizara Hizara Fanjakan’Andriamanitra